၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကိန်းဂဏန်းများ
11 Jun 2018 . 5:50 PM
တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပရိသတ်တွေ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲက အခု ကြာသပတေးနေ့မှာ စတင်ကျင်းပပါတော့မယ်။ အဲဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေကို ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . . . . .
၇၃၆ – ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲဝင် အသင်း(၃၂)သင်းရဲ့ စုစုပေါင်း ကစားသမားအရေအတွက်ပါ။
ပေါင်(၁.၅၅၇)ဘီလီယံ – အဲဒီကစားသမား (၇၃၆)ဦး သူတို့ရဲ့ ကလပ်အသင်းတွေမှာ လက်ရှိရနေတဲ့ လစာငွေ အားလုံးပေါင်း ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။
၁၂၄ – လာမယ့် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ အင်္ဂလန်ကလပ်အသင်းတွေမှာ ကစားနေတဲ့ ကစားသမားအရေအတွက်က (၁၂၄)ဦးအထိရှိပါတယ်။ လာလီဂါ(၇၈ဦး)က ဒုတိယ၊ ဘွန်ဒစ်လီဂါ(၆၇ဦး)က တတိယနေရာမှာ ရပ်တည်နေတယ်။
၈ – ၁၉၃၀ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲက စတင်ရေတွက်ရင် ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကို ကိုင်မြှောက်နိုင်တဲ့အသင်းက စုစုပေါင်း (၈)သင်းသာရှိပါတယ်။ အဲဒီအသင်းတွေကတော့ ဘရာဇီးလ်၊ အီတလီ၊ ဂျာမနီ၊ ဥရုဂွေး၊ အာဂျင်တီးနား၊ အင်္ဂလန်၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်တို့ပါပဲ။
၂၉၂၆၁၇၂ – ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲစဉ်(၆၄)ပွဲအတွက် ရောင်းချသွားမယ့် လက်မှတ်အရေအတွက်ပါ။
၁၉ – ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံးကစားသမား သြစတြေးလျကွင်းလယ်လူ ဒန်နီယဲလ်အာဇာနီ Daniel Arzani ရဲ့ အသက်ပါ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစမယ့်အချိန်ကျရင် သူ့ရဲ့အသက်က (၁၉)နှစ်၊ (၁၆၁)ရက်ရှိပါပြီ။
၆ – ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲမယ့် ဆယ်ကျော်သက်ကစားသမား အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ အာဇာနီ(သြစတြေးလျ)၊ ဘာပေ (ပြင်သစ်)၊ ဟာကီမီ (မော်ရိုကို)၊ အူဇို (နိုက်ဂျီးရီးယား)၊ ၀ါဂူး (ဆီနီဂေါ)၊ အာနိုးလ် (အင်္ဂလန်)တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၄၅ – ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ အီဂျစ်အသင်းဂိုးသမား အယ်လ်ဟာဒါရီ El Hadary ရဲ့အသက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် အသက်အကြီးဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁ – ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ အရပ်အရည်ဆုံး ခရိုအေးရှားဂိုးသမား ကာလီနစ် Kalinic ရဲ့ အရပ်အမြင့်က ၂၀၁ မီတာ(၆ပေ ၅ လက်မ)ရှိပါတယ်။
ပေါင် ၂၈၃၃၅၈၄၀ – အခုနှစ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲမယ့်အသင်းရရှိမယ့် ဆုကြေးပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအသင်းက ပေါင်(၂၀.၈)သန်း၊ တတိယရမယ့်အသင်းက ပေါင်(၁၇.၉)သန်းရရှိမှာပါ။
Photo:Youtube,Goal.com,The Straits Time,Socceroos,Vexels
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲနဲ့ပတျသကျတဲ့ စိတျဝငျစားစရာ ကိနျးဂဏနျးမြား
တဈကမ်ဘာလုံးက ပရိသတျတှေ စောငျ့မြှျောနကွေတဲ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲက အခု ကွာသပတေးနမှေ့ာ စတငျကငျြးပပါတော့မယျ။ အဲဒီပွိုငျပှဲနဲ့ပတျသကျတဲ့ စိတျဝငျစားစရာ ကိနျးဂဏနျးအခကျြအလကျတှကေို ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ . . . . .
၇၃၆ – ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲဝငျ အသငျး(၃၂)သငျးရဲ့ စုစုပေါငျး ကစားသမားအရအေတှကျပါ။
ပေါငျ(၁.၅၅၇)ဘီလီယံ – အဲဒီကစားသမား (၇၃၆)ဦး သူတို့ရဲ့ ကလပျအသငျးတှမှော လကျရှိရနတေဲ့ လစာငှေ အားလုံးပေါငျး ပမာဏဖွဈပါတယျ။
၁၂၄ – လာမယျ့ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ အင်ျဂလနျကလပျအသငျးတှမှော ကစားနတေဲ့ ကစားသမားအရအေတှကျက (၁၂၄)ဦးအထိရှိပါတယျ။ လာလီဂါ(၇၈ဦး)က ဒုတိယ၊ ဘှနျဒဈလီဂါ(၆၇ဦး)က တတိယနရောမှာ ရပျတညျနတေယျ။
၈ – ၁၉၃၀ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲက စတငျရတှေကျရငျ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုကို ကိုငျမွှောကျနိုငျတဲ့အသငျးက စုစုပေါငျး (၈)သငျးသာရှိပါတယျ။ အဲဒီအသငျးတှကေတော့ ဘရာဇီးလျ၊ အီတလီ၊ ဂြာမနီ၊ ဥရုဂှေး၊ အာဂငျြတီးနား၊ အင်ျဂလနျ၊ ပွငျသဈ၊ စပိနျတို့ပါပဲ။
၂၉၂၆၁၇၂ – ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပှဲစဉျ(၆၄)ပှဲအတှကျ ရောငျးခသြှားမယျ့ လကျမှတျအရအေတှကျပါ။
၁၉ – ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ အသကျအငယျဆုံးကစားသမား သွစတွေးလကြှငျးလယျလူ ဒနျနီယဲလျအာဇာနီ Daniel Arzani ရဲ့ အသကျပါ။ ကမ်ဘာ့ဖလားစမယျ့အခြိနျကရြငျ သူ့ရဲ့အသကျက (၁၉)နှဈ၊ (၁၆၁)ရကျရှိပါပွီ။
၆ – ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ပါဝငျဆငျနှဲမယျ့ ဆယျကြျောသကျကစားသမား အရအေတှကျဖွဈပါတယျ။ သူတို့ကတော့ အာဇာနီ(သွစတွေးလြ)၊ ဘာပေ (ပွငျသဈ)၊ ဟာကီမီ (မျောရိုကို)၊ အူဇို (နိုကျဂြီးရီးယား)၊ ဝါဂူး (ဆီနီဂေါ)၊ အာနိုးလျ (အင်ျဂလနျ)တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
၄၅ – ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲရဲ့ အသကျအကွီးဆုံးဖွဈတဲ့ အီဂဈြအသငျးဂိုးသမား အယျလျဟာဒါရီ El Hadary ရဲ့အသကျဖွဈပါတယျ။ သူဟာ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတဈလြှောကျ အသကျအကွီးဆုံးကစားသမားလညျးဖွဈပါတယျ။
၂၀၁ – ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ အရပျအရညျဆုံး ခရိုအေးရှားဂိုးသမား ကာလီနဈ Kalinic ရဲ့ အရပျအမွငျ့က ၂၀၁ မီတာ(၆ပေ ၅ လကျမ)ရှိပါတယျ။
ပေါငျ ၂၈၃၃၅၈၄၀ – အခုနှဈပွိုငျပှဲမှာ ဗိုလျစှဲမယျ့အသငျးရရှိမယျ့ ဆုကွေးပမာဏဖွဈပါတယျ။ ဒုတိယအသငျးက ပေါငျ(၂၀.၈)သနျး၊ တတိယရမယျ့အသငျးက ပေါငျ(၁၇.၉)သနျးရရှိမှာပါ။